Malunga nathi -Shenzhen Wonderfulgold Clothing Co., Ltd.
Gxila ekuqhubekeni kweSweater yeBhanti yaBasetyhini kangangeminyaka eli-15
Ukwenza iBrazil yeFashoni yeBrand yeSweater yaBasetyhini
Sinike umfanekiso, unokuba nesitayile esithandwayo! I-WG igxile kwii-odolo zokuthenga zokwenza iisampulu ngokusekwe kwimifanekiso, kwibhetshi encinci nakwizikudusi ezikumgangatho ophezulu. I-WG yasekwa ngo-2006, ukuza kuthi ga ngoku abasebenzi basondela kwi-100, kubo abasebenzi beengcali abangama-20 bagxila kuyilo & nophuhliso, kubuchwephesha bezandla, kubandakanywa neenkosi ekunikwa kuzo idatha echanekileyo, abazobi, abaphathi bezandla zokuhlangabezana neemfuno zeesampulu -Ukwenza ngokomfanekiso ngamnye, phinda uhlele kwakhona kwibhetshi encinci kunye nokuhanjiswa kwexesha nje. Zonke iintlobo zesampulu kunye nezixhobo zemveliso zibonelelwe ukuhlangabezana neemfuno zeerhasi ezahlukileyo, umz. 3GG, 5GG, 7GG, 9GG, 12GG, 14GG, 16GG.
Amagumbi okuYila kunye neeHolo zoMboniso sele zimiselwe zombini eShenzhen naseHongkong. Kusungulwe iifektri eDongguan, kwisiXeko, eGuangdong, enye ikwidolophu eyaziwayo yase-China-Dalang, enye ise-Humen Town. I-WG lishishini lokuvelisa elidibanisa uyilo, imveliso kunye nentengiso njengefom enye ejolise kakhulu kuphuhliso lwempahla enithiweyo. Ngamagama, kwi-WG, unokuba nejezi ezinithiweyo okanye iimpahla ezinithiweyo njengoko unqwenela, okanye njengoko uthanda. Unokufumana ii-sweatshi zesiko kwifashoni ukuze uhlangane nolwaneliseko lwakho.
Abayili abangama-20 beepatheni zabayili kunye nabayili
Icandelo lethu lemveliso yejezi enithiweyo, umyili kunye nenkampani baye basebenzisana iminyaka emininzi.
Iiseti ezingama-86 zezixhobo zemveliso zejezi ze-sweater ezinithiweyo
Izixhobo zethu zokukhupha ijezi zilungile, ezinje ngomatshini wokuthunga, umatshini wokusonga. Umatshini wokuthunga odibanisa ukusika ibhedi, ukusika imela, isinyithi somphunga, ukulungisa imipu yophawu kunye nezinye izixhobo ziyafumaneka ngamaxabiso afanelekileyo kunye nenkonzo enengqiqo, ukuhanjiswa okukhawulezayo, ukuphumelela komgangatho ogqwesileyo othandwayo ngabathengi.
Abasebenzi abangama-68 bokuvelisa ijezi enobuchule
Amava omsebenzi ophakathi wabasebenzi bethu angaphezulu kweminyaka emi-5, bonke belandela abasebenzi abanezakhono kwiminyaka emininzi, siqhelene nokuziqhelanisa ne-e-yorhwebo, ukuqonda umgangatho wemveliso kunye nesantya sokuhambisa. Ngokwemfuno yeqondo eliphezulu, ulungelelwaniso olufanelekileyo lwemveliso yendibano yefektri. Ishedyuli yokuqinisekisa ixesha lakho lokuhambisa.